जेठ २०, २०७७ सन्ध्या पौडेल
१) अस्पतालको अवस्था कस्तो छ ? बिरामीहरु कत्तिको आउँछन् ?
अहिले हामीलाई निकै अप्ठयारो भएको छ । अस्पतालका प्राय सेवाहरु बंद छन् । हामीले अहिले ११ देखि ३ बजे सम्म मात्रै अस्पताल संचालन गरिरहेका छौ । बिरामीहरुको चाप पनि त्यति धेरै छैन् । ईद सकिएको भएर अहिले दिनमा १५ देखि २० जना सम्म बिरामीहरु आउँन थालेका छन् ।
२) अस्पताल र बिरामीको ब्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी स्वास्थय कर्मी भएकोले बिरामीको समिपमा रहेर सेवा दिनु पर्ने हुन्छ । बिरामीको परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ ।त्यसकारण हामीले अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाको लागि उच्च सर्तकता अपनाएका छौ । पिपिए, माक्स, गल्बस लगाएतका ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पूर्ण रुपमा लगाएर मात्र बिरामीको परीक्षण गर्ने गरेका छौ भने बिरामीहरुलाई पनि थर्मलगनद्धारा शरीरको तापक्रम जाँच गरी उनीहरुको यात्रा विवरण सोधपुछ गरी डिटवल पानीले हाथ राम्ररी पखालेर सेनेटाईजरको प्रयोग गर्न लगाई माक्स नभएको खण्डमा माक्स दिएर मात्रै अस्पतालमा प्रवेश गराएका छौ र सकभर बिरामीलाई मात्रै भित्र जान दिने व्यवस्था गरेका छौ । यसले हामीलाई केही हदसम्म भएपनि सुरक्षित राखेको भान हुन्छ ।
३) गर्मी सुरु भईसकेको अवस्थामा अहिले कस्ता किसीमका आँखाका समस्याहरु लिएर बिरामीहरु आउने गरेका छन ?
गर्मीयाममा प्राय आँखा चिलाउने, रातो हुने, बिझाउने जस्ता समस्याहरु बढी हुन्छन् । तर अहिले लकडाउन भएकोले अन्य समयमा भन्दा बढी मोवाईल कम्पयूटर ल्यापटप र टिभी को प्रयोग बढेको छ । जसको लगातार प्रयोगले आँखा सुख्खा हुने, आँखा कम देख्ने आँखाको कारण टाउकोमा समस्या भएका बिरामीहरु बढी आएका छन् भने शल्यक्रियाका बिरामीहरु पनि आएका छन् । तर हामीले शल्यक्रिया सेवा अहिले बन्द गरेका छौ । यो सेवा लकडाउन पछि मात्रै संचालन गर्ने योजना छ ।
४) यस्तो समस्याबाट कसरी बच्ने ?
आँखालाई सफा राख्न बेला बेलामा सफा पानीले आँखा पखालिरहने, आँखा रातो भएमा, पोलेमा, बिझाएमा वा आँखा सुख्खा भएमा डाक्टर संग परामर्स लिई आईड्रपको प्रयोग गर्ने । लामो समयसम्म लगातार रुपमा कम्प्यूटर, मोवाईल लगायतका सामाग्रीको प्रयोग नगर्ने गर्नै परे पनि केही समय बिश्राम लिेन वा लाईट रिफ्लेक्ट ग्लासको प्रयोग गर्ने । आँखामा कुनै गम्भीर समस्या देखा परेमा आँखा विशेषज्ञसंग सम्पर्क राख्ने ।
५) अहिले के कुराले बढी समस्या पारेको छ ?
कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट हुने कोभिड १९का कारण विश्नै मन्दी र बन्दीमा छ । यस्तो अवस्थामा समस्या नहुने त कुरै भएन । हामीले त सकभर सेवा दिईरहेकै छौ । तर जो बिरामीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई भने निकै समस्या भएको गुनासो सुनाउनु हुन्छ । एक त यातायात बन्द छ त्यसमाथि पनि टाढा टाढाबाट आउने बिरामीहरु हुनुहुन्छ । सवारी साधन हुनेहरुलाई पनि सास्ती छ । किनकी पास छैन । जसको कारण सास्ती हुने गरेको छ ।
६) स्थानीय सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्नु पर्छ ?
स्वास्थ्य सेवा सबैलाई आवश्यक पर्ने हुँदा बिरामी भएर आएकाहरुलाई स्थानीय सरकारले पनि सहज तरिकाले अस्पताल सम्म स्वास्थ्य सेवा लिन आउने वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ । बिरामीहरुले पनि यदि अस्पताल आउनै पर्ने अवस्था छ भने मात्रै आउने नत्र घरमै बसेर घरेलु उपायहरुद्धारा आफ्नो आँखा स्वास्थ्य राख्ने काम गर्न पर्छ । हामीले अहिले अनलाई परामर्श पनि दिईरहेका छौ यदि आँखा सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा परामर्शको लागि हामी संग अनलाई मार्फत वा फोन कल मार्फत पनि जोडिन सक्नु हुन्छ । हामीले दिने सेवाका लागि हामी तत्पर छौ ।
७) अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
यो समय निकै असहज पूर्ण छ । तर हामीले हाम्रो धैर्यलाई गुमाउनु हुँदैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून नभए सम्म र सरकाको निर्देशन नआए सम्म हामी घरमै बसौ । अनावश्यक रुपमा बाहिर नजाऔ । सामाजिक दुरी कायम गरौ माक्स र सेनेटाईजरको प्रयोग गरौं आफू पनि सुरक्षित रहौँ र परिवार देशलाई पनि सुरक्षित राख्न मद्दत पु¥याउ । यदि स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं ।
मगलवार, जेठ २०, २०७७, ०१:०६:००
असार १६, २०७७ सन्ध्या पौडेल
असार १२, २०७७ सन्ध्या पौडेल